မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ဆင့်ကာပူရတဲ့ စင်ကာပူပါဗျို
good. you back to Singapore again. Pleased to hear that you're going to prioritise yourself instead of wasting with blogging.Last time, I thought you gotajob in singapore when i saw your photos with big smiles in your gathering final destination :)
တယ်.. အလုပ်အမြန်ရစေသား.. ငါ ဘလော့သကြားမင်းကြီး .. နားပူတယ်.. ဒီမယ်လိုဒီတစ်ယောက် အလုပ်မရရင် ဘလော့မရေးဘူးလုပ်တယ်.. ငါ့ ပီဒီအေ မှာ ရေးလိုက်ဦးမှ..
ကဲ သကြားမင်းကြီးကို အလုပ်မရရင် ဖင်လန်မယ်ပြောတဲ့ မယ်လိုဒီကို .. အလုပ်မြန်မြန်ရပေါစေလို့ ၊ ငါ့ရဲ့ သကြားမယ်လေးတွေ ထောင်ပေါင်းသောင်းချီလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်.. မဟုတ်... ကြားမကောင်း ကျော်မကောင်း .. ငါ နားရှက်တယ်။း)
မင်းမင်း ကောင်စုတ်ပလုတ်တုတ်သူများတွေ တညိုးထင်ကုန်ဦးမယ် အလုပ်မရရင် ဖင်လန်ကိုပဲလာတော့မယ် ပြောတဲ့ဟာကိုလူဆိုးပဲဖတ်တဲ့သူတွေလဲ ညက်ချိချက်တယ် ဟွန့်သူဖာသာသူ သကြားမယ်တွေ ထညက်မယ်တွေ ဆွဲထည့်ချင်တိုင်း နာ့ကို ရမယ်ရှာတာ နင်နော်..
မမရေ.. ဆင့်ကာပူမှ ကြိုဆိုပါတယ်. စောရီး စင်ကာပူမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ အလုပ်မြန်မြန်ရပါစေခင်ဗျာ....
ဟက်ဟက်.. ငါတဲ့ သကြားမင်း ၊ ငါကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖင်လန်နေလေတော့ ၊ အဲလေ.. ဖင်လန်မှာ နေလေတော့ .. ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ချလုံးမှာ ကျွန်းကသေးတော့ ဟိုဟာလေးလုပ်မိတာနဲ့ နေထိုင်ခွင့်မရကြသူများ၊ ဖင်လန်ကြစေ.. ဖင်လန်မှာ သကြားမင်း လေယဉ်ကွင်းက လာကြိုမယ်.. ခရစ်စ်မတ် ဘိုးဘိုးကြီးနဲ့ .. ဟုတ်ပလား ...တိန်...